Fumanisa iqanda elitsha le-Thanos Easter kuGoogle | I-Androidsis
Ukuba kukho imovie ekulindelwe ngolangazelelo ngayo, yiAvengers: Endgame. Ngesi sizathu, uGoogle ufuna ukuhlawula irhafu kwinto eza kuba ngumdlalo wokugqibela weAvengers. Ufuna ukuyihlawula njani le vidiyo intsha? Inkampani igqibe ekubeni yothuse abasebenzisi ngokwazisa iqanda elitsha le-Ista. Nangona ayisiyiyo nayiphi na enye. Kodwa sijamelene nelilungileyo ngalo msitho.
Ukususela Liqanda lePasika leThanos. Indlela entle uGoogle afuna ukuyibhiyozela kwi-premiere yeAvengers: Endgame, eya kuthi ngokuqinisekileyo ibe yimpumelelo enkulu kumabala emidlalo kulo nyaka. Inkampani ilazise njani eli qanda lephasika?
UGoogle uyakuthanda ukusebenzisa la maqanda eIsta kwiinjini yokukhangela. Ngoku sifumana enye inikezelwe kwenye ngaphandle kweThanos. Ukongeza, ibinokuba yintoni enye into, inkampani isishiya nezinto ezimangazayo malunga noku. Kuba iqanda le-Ista elinje libaluleke kakhulu, njengoko unokufumanisa kwividiyo.
Ngaba sele uzame ukusebenzisa le Thanos Easter Egg kuGoogle? Ngokuqinisekileyo kunjalo Umdla onomdla kakhulu kwicala lenkampani. Kumnandi kwaye kungokoqobo, kuba akukho mntu ulindele ukuba leqanda lePasika linakho. Ngokuqinisekileyo ngaphezu kwesinye sikuthathile!
Ayaziwa ukuba liza kubakho ixesha elingakanani iqanda lePasika kwiinjini yokukhangela. Ke ukuba ufuna ukufumanisa yonke into enokuyenza, Kuya kufuneka ukhawuleze kwaye ungaphoswa leli thuba. Kuba kubonakala ngathi ayizukufumaneka kwi-Intanethi ixesha elide. Kwividiyo unayo yonke ingcaciso malunga nayo.
Ngolu rhafu lunomdla, Inkulumbuso yeAvengers: Endgame ibhiyozelwa, esele zikhona kwimidlalo yeqonga. Umboniso bhanyabhanya othi ngokuqinisekileyo ulindelwe zizigidi zabantu. Ucinga ntoni ngale Thanos Easter Egg esetyenziswe nguGoogle?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Yiyo eyenzekayo xa usiya kuGoogle Thanos
I-PGA TOUR Golf Shotout njenge-arcade yokudlala igalufa ngokuchasene nabanye abadlali